Djibouti vs Somaliland iyo Siyaasadda Muuse Biixi
Sunday January 07, 2018 - 07:22:08 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Madaxweyn Muuse Biixi waa madaxweynaha Somaliland oo ah dal cadow badan leh oo dabino badan oo loo dhigay si xirfad leh uga soo baxay. Taa mahadeeda ilaahay ka sakow waxa leh hoggamiyaashii kala dambeeyey ee dalkan soo maray. Waxa hadda muuqata in Madaxweynaha cususbi si gaara ugu rixinayo dal yar oo dersikeena ah oo ay ku nool yihiin dad gaadhahaya nus malyuun qof kana kooban laba qoomiyadood oo midi Somali tahay. Djibouti waa dal leh daniihisa gaarka ah hoggaankiisuna mar walba danta dalkiisa ka hor mariyo danta cid kasto oo kale, waana sifaha lagu yaqaan hoggaanka toosan. Waxa hubaal ah inaan Djibouti jeclayn inay soo baxdo Somaliland la aqoonsahahay, marna aanay aqbali karin in dekedda Berbera taabo qaada oo noqoto deked caalami ah oo tartan la gasha dekedaha dalkeeda. Waxa kale oo meesha iyana ku jirta cadaawada muuqata ee ka dhexeysa Imaraadka iyo Djibouti iyo weliba Imaaraadka iyo Somalia oo aan midkoodna aqbali karin doorka DP World ee Berbera, imaatinka Fly Dubai iyo Arabia ee Hargeysa iyo saldhigga Imaaraadka ee Berbera iyadoo aynu ognahay in Djibouti iyo Somaliyaba gucli ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen dawlado dalalkooda maalgashada oo weliba saladhigyo ku yeesha xilli ay Djibouti ka jiraan shan saldhig oo dalwaddo shisheeye leeyihiin, Somaliyana kii ugu horreeyey Turkigu ka furtay, Djiboutina toddobaadkii hore ku dhawaaqday inay soo dhaweynayso in Turkigu dalkeeda saladhig ka samaysto. Madaxwyene Farmaajo ityo Madaxweyne Geelle labuduba waa ku saxsan yihiin inay sidaa yeelaan waayo danta dalalkooda ayay eeayaan oo meel marinyaan. Laakiin Madaxweyne Muse Biixi ma leeyahay aragtidii madaxweynayaashii hore ee Somaliland oo iyagu si xirfad iyo ku dhac leh uga soo gudbay siyaasadaha Somaliland diidka ah ee ay ka midaysan yihiin Somalia iyo Djibouti si xeeldheeriyana uga faaiidiistay danaha is diidan ee Imaaradka, Djibouti iyo Somaliya.
Iyadoo hadalka suuqa ku jiray muddoyinkii dambe uu u badnaa in Muse uu Djibouti u arkayo wax weyn una haysto nasteexa Somaliland, ayay indhaheenu qabteen toddobaadkii hore wakiilka Djibouti u fadhiya Somaliland oo madaxtooyada lagu maamuusay oo weliba madaxweynaha oo keli ah la fadhiya isagoo is cufaya iyo madaxweyne Biixii oo qosol ku maaweelinaya. Sida caadiga ah safiiradu waxay la xidhiidhaan Wasaarada Arrimaha Dibedda, wayse jiraan xaalado gaara oo wakiilada dalalka dibedda looga yeedho ama lagu casuumo madaxtooyada laakiin xaalad noocaas ahi hadda ma taalo mana aragno wax gaara oo Djibouti Somaliland u qabatay oo uu wakiilkoodu ku mutaysto in madaxtooyada lagu maamuuso. Arrintaasi waxay walaac badan ku abuurtay bulshada gaar ahaana aqoon yahanka Somaliland.
Madaxweyne Muse waxa lagaaga fadhiyaa inaad ciyaarato siyaasad meel durugsan wax ka eegta sidii ay yeeli jireen madaxweynaashii kaa horreeyey marka kastana aad danta Somaliland ka hor mariso danta cid kasta oo kale. Yaan dawladaada loo arkin mid meel dhow wax ka eegta oo danaha dal yar oo aynu deris nahay fulisa. Waa inaad dhiirrideeda yeelaata inaad si cad uga badheedho meelmarinta danaha dalkaaga, Somaliland, xataa haddii ay taasi keenayso inaad qaadato go’aan la mid ah kii uu qaatay halyeygii weynaa ee CIgaal oo mar albaabada u xidhay xadka Somaliland iyo Djibouti markuu fahmay qorshaheeda ku waajahan Somaliland. Inay halkaa gaadho ilaahay ka baryi mayno mana rabno, mana muuqataba laakiin hadday xaalad taa kelifaysaa timaado waa inaad dhiirideeda yeelataa. Haddiise sida aan maaqlayno waxan ka aragnay ay ku socota, wuxuun baad la mid noqonaysaa siyaasiinta Somaliya ee Afrikaanka danhooda u jooga Somaliya u yaqaanna "Hiil Walaal”, waana nasiib darro weyn.
By Abokor Barud